Fiteny portiogey: loharano kit
Famandrihana ny gazety sy hahazo ny Maso-taratasy mba hanampy anao hamaritra ny fomba tsara indrindra hianatra ny teny fa ianao Ity no fahatelo lahatsoratra natokana ho an’ny fifantenana ny tsara teny loharanon-karena eo amin’ny Aterineto (Rohy amin’ny hafa hisokatra ao ny andro vitsivitsy dia nifanakalo tena tsara, tsara-tia, azo ampiharina, ary voaporofo ny loharanon-karena (ary tsy nisy nametraka ny URLs). misy ireo tononkira sy raki-tsary amin’ny karaoke mba afaka mihira miaraka ny toerana tena mpanakanto.) Ny zavatra rehetra dia rava ho mozika genres, izy ireo no tena be dia be. Tsara ny harena ho an’ny mpankafy mba hihira.
Amin’ny ankapobeny vola, fa ianao dia afaka mahita ao amin’ny Internet fizarana I.
Afaka mahazo ny mazava ho azy ireto: izany no online onjam-peo. Alaina na inona na inona fitaovana (ny telefaonina, takelaka amin’ny fampiharana ny teny, ny solosaina fotsiny ny tranonkala nanokatra). Liana amin’ny fomba amam-panao faritra, ny firenena, ny lohahevitra — ankafizo.
katalana ao amin’ny tompon’ny teny
Mieritreritra aho fa ny loharano dia ilaina ho an’ny olona rehetra. Momba ny zavatra, dia avy ny lisitry ny mpampiasa mavitrika, rehetra avy any Brezila. Online gazety momba isan-karazany, tsy ara-tsiantifika ny lohahevitra, ny fifandraisana, lamaody, olo-malaza, dia isan-karazany vaovao amin’ny Ankapobeny, tokony ho famakian-teny, izay ny rehetra dia mahita zavatra mba hanandrana: tsy toy ny ara-dalàna tiany fa efa nihaona eto dia tena ilaina ny teny izay ilaina ho tsotra ny resaka. eto be dia be ny zavatra: lahatsoratra, horonan-tsary, tononkira. Ny zava-drehetra dia ho tapaka, ny fizarana, ny fiteny portogey, fa ny zava-drehetra dia mazava — toerana ny mozika izay ny fanatanjahan-tena izay vehivavy izay horoscopes. Ry mpitantana fiteny vondrona rastaskivat ity lahatsoratra ity ao amin’ny vondrona, masìna ianao, aza adino ny manao rohy amin’ny tranonkala Eugene kashaeva, reny ny mpamorona ny tetikasa I. aho, Tia mamorona, sy ny fitiavana ny olona tsara dia mianatra tapa ny teny, ary amin’izao fotoana izao dia namely ny famoronana (ary Kantoney)
Ny Fiarahana Amin'ny Lehilahy Portugal →